Maxaa kala haysta iskuulada iyo kaniisadaha? | Somaliska
Waxaa la gaaray waqtigii iskuulada la xiri jiray iyadoo iskuulo badan ay sameeyaan in xaflada xiritaanka ay ku qabtaan kaniisadaha. Arintaan ayaa dood dhalisay sanadihii la soo dhaafay iyadoo Waaxda Baaritaanka Iskuulada (Skolinspektionen) ay dacwooyin badan soo gaareen sanadkii la soo dhaafay. Dacwadaas waxaa ka mid ahaa iskuul ku yaala magaalada Båros oo baadariga kaniisada lagu eedeeyay in uu ducooyin Kiristaan ah goobta xaflada ka sameeyay.
Waaxda baaritaanada Iskuulada ayaa go,aamisay in xaflada lagu qaban karo kaniisadaha balse ay mamnuuctahay in wax diin ku saabsan halkaas looga hadlo.
Idaacada Sverige oo wareysi ka qaatay dhowr ka mid ah ardada dhigata iskuul ku yaala magaalada Göteborg oo xafladii ku qabtay kaniisada ayay ardada Muslimiinta ahi sheegeen in aysan wax dhibaato ah u arkin.
Mudaharaad ka dhacay Stockholm
jimcaale brother, waqtigii iskoolada la xeri jirey mala bedeley waayo sanadkii hore 11jun ayaa la xerey hadana iskoolkeena waxu nugu wargeliyeen 30jun inla xeri doono ,,, ma isbedel guud ayaa lugu sameeyey waqtiga la xeri jirey iskuulada
Khalid waan maqlay in iskuulada la xirayo waqtigaas balse ma maqal war rasmi ah oo sheegaya in waqtiga la badalay.
khalid sxb 10 jun ayaa laxirayaa iskuulada taasoo ku aadan jimcaha soo socda